Iindaba - Amanqaku anomdla malunga noMnyaka oMtsha waseTshayina
1, Usuku lokuqala lwenyanga yokuqala engabizwa ngokuba nguMnyhadala weNtwasahlobo kumaxesha amandulo, kodwa wabizwa ngokuba ngumhla woNyaka oMtsha.
2, Kwimbali yaseTshayina, igama elithi "uMnyhadala weNtwasahlobo" ayingombhiyozo, kodwa isalathiso esikhethekileyo ku "Ukuqala kweNtwasahlobo" yamagama angama-24 elanga.
3, UMnyhadala weNtlakohlaza ubhekisa ekuqaleni konyaka wamaTshayina, oko kukuthi, usuku lokuqala lwenyanga yokuqala yenyanga. Umnyhadala waseTshayina weNtwasahlobo ngokwentetho ebanzi ubhekisa kumhla wesibhozo kwinyanga yeshumi elinambini, okanye kwinyanga yeshumi elinesibini kwinyanga yama-23, 24, kude kube ngumhla weshumi elinesihlanu wenyanga yokuqala yenyanga..
4, Nangona uMnyhadala weNtwasahlobo ulisiko ngokubanzi, kodwa umxholo wokubhiyozela wahlukile mihla le. Ukusukela kusuku lokuqala kude kube ngumhla wesixhenxe, ngumhla wenkukhu, usuku lwenja, usuku lwehagu, usuku lwegusha, usuku lwenkomo, usuku lwehashe kunye nomhla indoda.
5 ， Ukongeza e-China, maninzi amanye amazwe emhlabeni abhiyozela uNyaka oMtsha njengeholide esemthethweni. Zezi: UMzantsi Korea, uMntla Korea, iVietnam, iMalaysia, iSingapore, i-Indonesia, iMauritius, iMyanmar neBrunei.